PSG oo soo bandhigtay Mbappe iyo taageerayaasha oo si waali ah u soo dhaweeyay - Wargane News
Home Sports PSG oo soo bandhigtay Mbappe iyo taageerayaasha oo si waali ah u...
PSG oo soo bandhigtay Mbappe iyo taageerayaasha oo si waali ah u soo dhaweeyay
Naadiga PSG ayaa soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Mbappe kaa oo heshiis amaah ah uga yimid naadiga Monaco.
Laacibka ayaa kal ciyaareedka soo socda si joogta ah ugu biiri doona PSG lacago dhan 166 milyan oo bound taa oo ka dhiga inuu yahay laacibka labaad ee ugu qaalisan kubbada cagta iyo da’yarkii ugu qaalisanaa ebid.
Taageerayaal aad u fara badan ayaa soo dhaweeyay dhaliyaha reer France ee loo dhiibay lambarka 29-aad.
“Haddii ay tahay hal Euro amaba 180 milyan oo euro wax iga galay malahan aniga,” Mbappe ayaa sidaa yiri.
“Anigu ma bixin lacagahaas anigana maahan qofka jeebka ku shubanaya.
“Muhiim ayay ahayd inaan ka tagin France. Muhiim ayay ahayd inaan dib ugu soo laabto magaaladii aan ku soo koray.”.
Daawo Madaxwaynaha Somaliland Axmed Silaanyo Oo Jaaliyada Reer Somaliland Uk Iyo Labada Xisbi La Kulmay Islamrkaana Qireen Wax Qabadka Xukuumada